Tompon'ny haino aman-jery | NS6.com
Doka ivelan'ny trano
Tompon'ny haino aman-jery
Vahaolana ho an'ny tompona haino aman-jery
Araraoty ireo fitaovana rehetra atolotry NS6 anao amin'ny maha-tompona haino aman-jery anao.
Ny fiasa ho an'ny tompona haino aman-jery
CRM ho an'ny tsena
Miaraka amin'ny NS6 ianao dia afaka mitantana ireo mety ho mpanjifanao, mifanerasera amin'izy ireo ary afaka manendry azy ireo amin'ny sehatry ny dokambarotrao amin'ny fomba haingana sy mahomby. Fitaovana iray mifantoka amin'ity tsena ity ihany izy io.
Tantano ny katalaoganao manokana
Hisoratra anarana amin'ny sehatry ny dokam-barotra vaovao, havaozy ny fampahalalana anao na vonoy izy ireo. Ao amin'ny NS6 ity dingana ity dia haingana sy mahomby; mampakatra sary na mamatotra ny sehatra fanaovana dokam-barotra amin'ny mpanjifanao.
Fampahalalana tena izy
Ataovy milamina sy voaro amin'ny rahona ny mombamomba anao; mamela ny ekipanao iray manontolo hiditra amin'ny fampahalalana havaozina amin'ny fotoana tena izy, mety ho an'ireo orinasa manana habaka dokam-barotra amin'ny faritra samihafa.
Mifandraisa haingana kokoa amin'ireo mety ho mpanjifa
Hiseho manerana ny tamba-jotra NS6 Media Buyers ny habaka fanaovana dokambarotra anao, ahafahanao manatona ny mpanjifa any amin'ny faritra hafa ary hifampiraharaha mora kokoa. Fifandraisana amin'ny NS6 dia mivantana miaraka aminao, tsy misy mpanelanelana.
Avoahy izao ny doka-nao any ivelany